Olona maherin'ny 600 000 no kendrena amin'ilay hetsika momba ny fidiovana sy ny rano ao amin'ny tanànan'Antananarivo, Moramanga ary Toamasina mba hiatrehana ny COVID-19
Fanambarana iarahan’ny MEAH - UNICEF- CUA
08 Jolay 2020
Olona maherin'ny 600 000 kendrena aminâ€™ilay hetsika momba ny fidiovana sy ny rano ao amin'ny tanÃ nan'Antananarivo, Moramanga ary Toamasina hiatrehana ny COVID-19, izay karakarainâ€™ny Ministeran'ny Rano, ny Fahadiovana sy ny Fidiovana miaraka aminâ€™ireo mpiaramiombonâ€™antoka aminy, ao anatin'ny hetsika Avotr'Aina.
Antananarivo, 30 Jona 2020: Tanterahina ao anatinâ€™ny telo volana manaraka any amin'ny tanÃ na telo ny fanentanana lehibe mikasika ny fahazoana rano fisotro madio sy fidiovana. Ireo tokantrano marefo indrindra any amin'ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy any Toamasina ary koa ireo toerana andehananâ€™ny besinimaro toy ny sekoly, ny toeram-piasana ary ny tsena no kendrena aminâ€™izany. Io fanentanana io izay mitentina mihoatra ny $470,000 avy amin'ny UNICEF sy ireo mpamatsy vola (DFID, KOICA, DANIDA, UNICEF) dia mikendry ny hampihenana ny fihanaky ny COVID-19 amin'ny alÃ lanâ€™ny hetsika isan-karazany toy ny:
Famatsian-drano madio amin'ny vidiny mirary 20 Ariary ho an'ny siny 20 litatra ho anâ€™Antananarivo ary 50 ariary ho anâ€™i Toamasina. Olona marefo miisa 600 000 izay mampiasa paompin-drano iombonana 2 000 no hisitraka izany
Fanomezana fitaovana fanasan-tanana (DLM) miaraka amin'ny savony any amin'ny toerana miisa 2,500 (toeram-piasana, tsena, sns)
Fizarana savony ho an'ny olona 200.000 ao amin'ny tokantrano 40.000 faran'izay marefo indrindra vokatry ny Covid-19
- Fametrahana peta-drindrina fanentanana eny amin'ny fitateram-bahoaka sy ny toerana andehanan’ny daholobe, arahana fanamafisana ny hafatra momba ny fihetsika sakana sy ny fanasana Tanana
- Fizarana fanafody HTH sy fitaovana EPI ao anatin’ny hetsika famonoana otrik’aretina ho an’ny fiara miisa 12 500 izay miasa amin’ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Ny ekipan'ny Borigady mandehandeha misahana ny fidiovana (BMH) eo anivon’ny Kaominina no hiandraikitra izany
- Famatsiana aro-vava azo sasàna ho an’ny mpamily sy resevera miisa 21 000 amin’ny fiara 12 500 izay miasa amin’ny fitateram-bahoaka ato an-drenivohitra
- Famatsiana “gel hydroalcoolique” izay ampiasaina amin'ireo fiara fitateram-bahoaka: taxi miisa 5 500 sy taxibe miisa 7 000
- Fandrarahana fanafody famonoana tsimok’aretina amin’ny tokantrano ahitana tranga-na COVID-19 sy ny manodidina azy
- Fanamafisana ny fanentanana mikasika ny fanasan-tanana amin’ny savony sy rano
Ity tetik’asa ity dia enti-miatrika ny toe-javatra mampanahy mikasika ny fidiovana eto an-drenivohitra. 34%n'ny mponina irery ihany tokoa mantsy no manana fitaovana fanasan- tanana amin'ny savony sy rano kanefa ny fanasana tanana amin'ny savony no fihetsika mora sy tsotra indrindra ilaina amin’ny ady amin’ny COVID-19.
Ny fampiasana ny fitateram-bahoaka dia ahiana hitera-doza amin’ny mety hiparitahan’ny valan'aretina. Ny antony dia satria mifanakaiky be loatra ny mpandeha ary ny fitsipiky ny fahadiovana dia tsy voahaja hatrany.
Izany toe-javatra izany no nahatonga ny UNICEF hanohana ny MEAH sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), Moramanga ary Toamasina. Izany fanohanana izany dia tafiditra ao anatin’ny paik’ady hiadiana amin’ny Covid-19 eo amin’ny sehatry ny EAH, izay mifandraika amin’ny drafitra iatrehana ny hamehana eto Madagasikara. Io hetsika io dia hanamafisana ny fisorohana sy hanampy amin'ny famerana ny fifindran'ny COVID-19 eny anivon’ireo tokantrano marefo, fokontany ary ny faritra izay lasibatry ny COVID-19. Natao ihany koa izany hetsika izany eny anivon’ireo toerana falehan’ny daholobe (trano fidiovana, sekoly, tsena, tobim-piantsonana) ary fitateram-bahoaka.
Ny "UNICEF dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fidiovana sy ny fanadiovana, mba hampijanonana ny fihanaky ny valan'aretina. Ilaina tokoa ny fanaraha-maso hentitra ny fitaovana ampiasaina sy ny fampiharana ny dingana rehetra amin’ireo arofenitra ireo, "hoy i Michel Saint-Lot, solontena UNICEF eto Madagasikara.
Ny Minisitry ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa dia nanindry tsara fa: "Ireo fihetsika iatrehana ny valan’aretina dia manamafy hatrany ny maha zava-dehibe ny Rano, ny Fanadiovana ary ny Fidiovana amin'ny hetsika rehetra enti-manohitra ny covid-19. Ny tanana dia iray amin'ireo fomba tena ifindran’ny otrik’aretina Covid-19. Noho izany, ny fanasana tanana amin'ny savony sy rano dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra ho fisorohana ny aretina."
Ny hetsika dia kasaina ho tanterahina ihany koa any Moramanga sy Toamasina ato anatin’ny andro vitsivitsy ho avy.
Sitrana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika
Tantaran'ny fianakaviana roa monina any amin'ny faritra Androy izay iaran'ny tsy fanjarian-tsakafo ny zanany.
Miezaka miatrika ny hain-tany ireo fianakaviana any Atsimo
Ny fanampiana avy amin'ny UNICEF amin'ny alàlan'ny famatsiam-bola avy amin’ ny USAID dia ahafaha mitsabo ireo ankizy iaran’ ny tsy fanjarian-tsakafo